Ogaden News Agency (ONA) – Jaliyadda Perth oo afur wadaag isugu timid ay ku kala warqaateen
Jaliyadda Perth oo afur wadaag isugu timid ay ku kala warqaateen
Waxaa fiidnimadii maanta oo taarikhdu tahay 12/08/2012 isugu yimid xaflad afurwadaag ah jaaliyadda S.Ogaadeeniya ee ku dhaqan magaalda Perth ee dalka Australia. Xafladan ayaa ahayd mid looga gollahaa in xubnaha jaaliyadda ay halmeel ku afuraan bishan barakaysa ee Ramadaan isla mar ahaantaana ku kala warqaataan xogta.
Waxaa kasoo qayb galay afur-wadaaga xubna ka socda qaybaha kala duwan ay jaaliyaddu ka koobantahay sida maamulka jaaliyadda, uruka haweenka, uruka dhalinta iyo marti sharaf kale oo katirsan Aqalka baarlamaanka ee dawlad gobaleedka galbeedka Australia.
Afurka kadib ayuu maamulka jaaliyaddu isla qaadaa dhigeen arimo badan oo ay kamid yihiin waxqabadka jaaliydda S.Ogaadeeniya ee Perth iyo baahidda jaaliyadaba. Xubnihii ka soo qayb galay afurka ayaa sheegay qaabka ay oola dhacsanyihiin waxqabadka jaaliyadda iyo isku xirnaantooda.
Intaa kadib, waxaa hadal koban kasoo jeediyay madasha gudoomiyaha jaaliyadda S.Ogaadeeniya ee galbeedka Australia Halgame Adam Cabdiraxmaan (Adan Dakhare) asagoo ooga mahadceliyay sida wanaagsan ee ay ooga soo qaybgaleen xafldan afur wadaaga ah wuxuuna ku guubaabiyay dhamaan jaaliyadda qaybaheeda kala gadisan in ay sii laban laabaan halganka geedi socodka loogu jiro xornimadda Ogaadeeniya.
Hadaba intaas kadib gudoomiyuhu waxa uu kusoo dhaweeyay warbaahiyaha afhayenka JWXO Mudane Cabdiqaadir Hirmooge (Cadaani) oo asaguna ka warbixiyay xaaladda guud ee Ogaadeeniya ay ku sugantahay iyo halka uu halganku marayo.
Guud ahaan waxaa kasocda wadanka Australia abaabul balaadhan oo noocyo badan leh loogana golleeyahay sidii loo fashilin lahaa gumaysatada guunka ah ee Itoobiya.